Ị̀ Maara Gbasara Ndị Isi Ndị Agha Rom Oge Ochie na Enyo Ndị Ijipt Oge Ochie?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Maya Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Gịnị bụ ọrụ ndị isi ndị agha Rom n’oge ochie?
Onye a a kpụrụ ebe a bụ onyeisi ndị agha aha ya bụ Marcus Favonius Facilis
N’Agba Ọhụrụ na Baịbụl, e nwere ebe ụfọdụ e kwuru okwu ndị isi ndị agha Rom. Onye agha ahụ guzo nso n’ebe a kpọgidere Jizọs n’osisi bụ onyeisi ndị agha. Kọnịliọs bụ́ onye Jentaịl mbụ ghọrọ Onye Kraịst bụbu onyeisi ndị agha. Onye agha a gwara ka ọ hụ na a pịara Pọl onyeozi ụtarị, nakwa Juliọs, onye a gwara ka o duru Pọl gaa Rom, bụcha ndị isi ndị agha.—Mak 15:39; Ọrụ Ndịozi 10:1; 22:25; 27:1.
Ndị a a na-akpọ ndị isi ndị agha Rom na-edu ndị agha na-eji ụkwụ aga. Ha na-edukarị ndị agha iri ise ruo otu narị aga agha. Ihe ndị so n’ọrụ ha bụ ịzụ ndị agha, ile ma uwe ha na ngwá agha ha ọ̀ dịkwa otú kwesịrị ekwesị. Ihe ọzọ ha na-emekwa bụ idu ha aga agha.
Ịbụ onyeisi ndị agha bụ ọkwá kachanụ onye agha nkịtị nwere ike iru. Ndị na-eru n’ọkwá a bụ ndị agha ma nke a na-akọ n’ịlụ agha nakwa ndị ga-eduli ndị agha nke ọma. Ọ bụ ha na-ahụ na a haziri ndị agha ndị Rom nke ọma otú ha ga-enwe ike imeri n’agha. Otu akwụkwọ kwuru na ‘ndị isi ndị agha na-abụkarị ndị aka ochie na ndị ma nke a na-akọ n’ịlụ agha.’
Olee ihe dị iche n’enyo ndị e nwere n’oge ochie na enyo ndị e nwere taa?
Ihe a bụ enyo ndị Ijipt oge ochie
Enyo ndị e nwere n’oge ochie adịchaghị ka enyo ndị e nwere taa. Ihe a na-ejikarị arụ enyo ndị nke oge ochie bụ ọla nchara. Ma, a na-ejikwa ọlaọcha, ọlaedo, ọla kọpa, ma ọ bụ ọlaọcha na ọlaedo a gwakọtara ọnụ arụ ụfọdụ. A na-etekwa ọla ndị ahụ ihe ndị ga-eme ka ha na-egbuke egbuke. Ebe mbụ e kwutere okwu enyo na Baịbụl bụ mgbe a na-ekwu gbasara ụlọ nsọ mbụ ụmụ Izrel rụrụ maka ife Chineke. Ụmụ nwaanyị ji enyo ha nye onyinye ka e jiri rụọ efere ọla kọpa na ihe ndọkwasị ya. (Ọpụpụ 38:8) Ọ ga-abụ na a gbazere enyo ndị ahụ, jirizie ha kpụọ efere ahụ na ihe ndọkwasị ya.
N’ọtụtụ ebe ndị e gwupụtara enyo ndị oge ochie n’ala Izrel na n’ebe ndị dị nso n’Izrel, a hụkwara ihe dị iche iche ụmụ nwaanyị ji achọ mma. Enyo ndị ahụ e gwupụtara na-adịkarị okirikiri. A na-eji osisi, ọla, ma ọ bụ ọdụ́ enyí arụ aka ha. A na-achọ aka ha mma, kpụọkwa ha ka ha yie nwaanyị. A naghịkwa achọ azụ ọtụtụ enyo ndị ahụ mma.
Enyo ndị oge ochie anaghị egosicha ihe nke ọma ka enyo ndị nke oge a. Nke a nwere ike inyere anyị aka ịghọta ihe Pọl onyeozi na-ekwu gbasara ya mgbe ọ sịrị: “Ka ọ dị ugbu a, anyị ji enyo ígwè na-ahụ ihe inyoghi inyoghị.”—1 Ndị Kọrịnt 13:12.
Ị̀ Maara?—Eprel 2015
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE Eprel 2015 | Ị̀ Ga-achọ Ịmụ Baịbụl?
Ị Maara?​—Eprel 2019
Ị̀ Maara?​—Febụwarị 2019